သတင်း - ULLER
ဥရောပ၌ရှိသော MBT အတွက်ပရဒိသု
ဥရောပ၌ MBT လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနှင့်အလှဆုံးလမ်းကြောင်းများ။ စပိန်နိုင်ငံရှိ Ham လမ်းကြောင်းမှနော်ဝေနိုင်ငံ Fjords မှသည်စကော့တလန်ရှိတော်ဝင် Deeside အထိပရဒိသုဥယျာဉ်များ၊ သင်သည်စွန့်စားခန်းများ၊ ရှုခင်းများနှင့်လွတ်လပ်မှုကိုပေးလိမ့်မည်။ ဤလမ်းကြောင်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသိပါ။
စက်ဘီးဖြင့် Camino က de Santiago
Camino de Santiago အကြောင်းသင်သိထားရန်လိုအပ်သည့်လမ်းညွှန်များ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ပို့စ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားလမ်းကြောင်း ၄ ခုသင်ပေးရုံသာမကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းထောင်နှင့်ချီသောစူးစမ်းရှာဖွေသူများကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်ဤလမ်းကြောင်းကိုလုပ်ရန်သော့များကိုလည်းပေးမည်ဖြစ်သော်လည်းဤအချိန် - စက်ဘီးဖြင့်! ပြင်ဆင်ပြီးပြီလား
စပိန်တွင် Trail Running လုပ်ရန်အံ့သြဖွယ်လမ်းကြောင်း ၁၀ ခု
စပိန်နိုင်ငံတွင်ပြေးနေသည့်လမ်းကြောင်းနှင့်အကောင်းဆုံးနှင့်အံ့မခန်းဖွယ်အကောင်းဆုံးသဘာဝလမ်းကြောင်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏မြောက်ဘက်မြောက်ဘက်မှဥရောပတောင်ထိပ်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီး Mallorca နှင့် Canary Islands ၏အံ့ဖွယ်ရာများကိုရှာဖွေလေ့လာခြင်း၊ ထိုလမ်းကြောင်းများမှကမ်းလှမ်းသောရှုခင်းများသည်အပြင်ပန်းအားကစားနှင့်သဘာဝဆက်သွယ်မှုကိုခံစားရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဒီ post မှာတော့သမိုင်းမှာကျခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးစက်ဘီးစီးသူတွေရဲ့လမ်းကြောင်းအကြောင်းပြောနေတာပါ။ သင်၏စက်ဘီးနှင့်နင်းနင်းထွက်တိုင်းသင်စိတ်အားထက်သန်စေရန်သင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။
သင့်အမေသည်မွေးဖွားအားကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူမအထူးနေ့တွင်သူမကိုဘာပေးရမည်ကိုသင်မသိပါ။ ငါတို့အတွက်စိတ်မပူပါနဲ့! သင်၏မိခင်နှင့်အတူထူးခြားစွာဖြစ်နိုင်မည် ဖြစ်၍ သူမ၏နေ့၏လက်ဆောင်နှင့်အနာဂတ်ဖြစ်ရပ်များအတွက်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေရန်သင့်အားလှပသောအတွေးအခေါ်များစွာပေးသည်။
100 မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ Kilian Jornet အကြောင်း။
Kilian Jornet ၏အဖြစ်အပျက်ကိုမည်သူမျှကြားနိုင်မည်မဟုတ်။ ၆ ရက်အတွင်း twice ၀ ရက်တောင်ထိပ်သို့နှစ်ကြိမ်တက်ခဲ့ပြီး ၁၅ နှစ်အရွယ်ရှိသူ၏ပန်းတိုင်များစာရင်းတွင်ပါသောရည်မှန်းချက်များကိုကျော်လွှားခဲ့သောအားကစားသမားသည်ကျွန်ုပ်တို့အားများစွာပြောစရာရှိသည်။ ဤစာမူတွင်အားကစားလောက၌မဖျောက်ဖျက်နိုင်သည့်အမှတ်အသားများကျန်ခဲ့သည့်စပိန်စူပါမင်းနှင့်သင့်အားမေးခွန်း ၁၀၀ နှင့်အဖြေများပေးသည်။
မက်ဒရစ်နှင့်ဘာစီလိုနာတို့အတွက် MTB အတွက်အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းများကိုရှာဖွေပါ
ဧပြီလ 07, 2021
သင် MTB ကိုနှစ်သက်သည်သို့မဟုတ်စတင်ရန်တိုက်တွန်းလိုသည်ဆိုပါကမက်ဒရစ်နှင့်ဘာစီလိုနာရှိအဆင့်များအားလုံးအတွက် MTB လမ်းကြောင်းများစွာကိုဤစာမူတွင်သင့်အားထားခဲ့ပြီးသင်၏ပြင်ဆင်မှုနှင့်လုံခြုံမှုအတွက်လိုအပ်သောအကြောင်းအရာများကိုလမ်းညွှန်ပေးပါမည်။ journeys.Keep ဖတ်ခြင်း!
အကယ်၍ သင်သည်အိမ်တွင်အားကစားဆိုင်ရာစွန့်စားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါကသင်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းသည်ပျံသန်းကာသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်လေ့ကျင့်ရေးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးမြတ်သောလမ်းညွှန်နှင့်အတူအိမ်တွင်လေ့ကျင့်ပေးခြင်းသည်မည်မျှအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်ကိုဆက်လက်လေ့လာပါ။
1234အောက်ပါ